Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Gumaysiga oo Gabadh ku Kufsaday Tuulada Cadaley.
Ciidamada Gumaysiga oo Gabadh ku Kufsaday Tuulada Cadaley.
Posted by Wariye Qaran	/ June 26, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Ogaadeniya gaar ahaan magaalada Qabridahare ee xarunta gobolka Qoraxay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada gumaysiga Itoobiya dhaaraanka u ah ee hawaarinta loo yaqaano ay gabadh ku kufsadeen tuulada Cadaley oo hoos timaada magaalada Qabri Dahare.
Gabadhan ayaa waxay ciidanka Hawaarintu xabsiga u taxaabeen taariikhdu markay ahayd 24/06/18 kii waxayna isugu dareen gabadhan jidh dil iyo kufsi aad u saameeyay gabadha, waxaana magaceeda naloogu sheegay Sahra Sheekh Duceeya.
Kooxda naxariista daran ee hawaarinta oo uu gumaysiga Itoobiya u sameeyay sidii ugu cabudhin lahaa uguna xasuuqi lahaa shacabka Soomaalida Ogaadeniya ayaa waxay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka aan is difaaci karin ee soomaalida Ogaadeniya.
Xaalada gabadhan ayaa aad looga dayrinayaa caafimaad ahaan ayadoo loo diiday inay arkaan wax ehedeeda ah sidoo kale loo diiday wax adeeg caafimaad ah inay hesho.
Ilaahay waxaan uga bararyaynaa inuu dhibaatada ka saaro guud ahaanba shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee gumaysigu haysto wararkan iyo waxa kasoo kordha dib ayaan idin kala socod siin doonaa.